Ogaden News Agency (ONA) – Ma dhici kartaa inuu R/wasaare Hailemariam Desalegn ka horyimid TPLF?
Ma dhici kartaa inuu R/wasaare Hailemariam Desalegn ka horyimid TPLF?
Su’aashaa ayay dad badan oo Itobiyaan ah isweydiinayaan, hasa ahaatee waxaa loo badinayaa inay dhab tahay arintaasi. Isbadal badan ayaa Itobiya ka guuxaya, waxaadna moodaa in Wayaane uu hadda noqday Ilka Doofaar oo la sahmiyay.
Ila-wareedyada u waramay shabakadda ayaa u sheegay inay aad u adagtahay in markale loo doorto Hailemariam Desalegn jagada R/wasaaraha.